mercredi, 10 avril 2019 20:57
CEG Antanimalandy-Mahajanga: Nahazo trano fianarana vaovao avy amin’ny Japoney
Notokanana ny sabotsy 06 sprily 2019 teny amin’ny CEG Antanimalandy Mahajanga, ny trano fianarana roa lehibe ahitana efitra roa avy. Fiaraha-miasa avy amin’ny governemanta japoney no nahazoana izao foto-drafitra izao.
Ny 31 janoary 2017 ny fanaovan-tsonia ny fifanaraham-panomezana teo amin’ny Masoivohon’i Japon sy ny CEG Antanimalandy. Mitentina 225 tapitrisa Ariary (69 464 euros) no teti-bidin’ny dabilio vaovao sy ireo trano roa misy efitrano roa avy ireo, izay trano fanitso tany am-piandohana ka narodana. Ny kilasy faha-4 no hisitraka ireo efitrano vaovao ireo.
mercredi, 10 avril 2019 20:41
RN5A Ambilobe-Vohémar: Hanohy ny asa natombok’i Hery Rajaonarimampianina i Andry Rajoelina
Nanao fanambarana tao amin’ny pejiny Facebook i Andry Rajoelina, androany, fa “Nandritra izay 80 andro nitantanako ny firenena izay dia nitady ny làlana rehetra, tsy mandry andro tsy mandry alina, nifampidinika tamin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena isan-tokony nikaroka ny tetika sy hevitra ary làlam-bola hoentina hanamboarana ity làlam-pirenena RN5A mampitohy an'i Ambilobe sy Vohémar ity”. “Koa ho atomboka ny asa tena izy, hanamboarana ny làlana mirefy 158 km, amin'ny sabotsy izao. Vitako androany ny sonia fifanarahana famatsiam-bola miaraka amin'ny governemanta Sinoa ary isika no nanao izany”.
Efa nanomboka ny asa fanamboarana io RN5A io ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina, ny volana aogositra 2018, taorian’ny nahazoana famatsiam-bola mitentina 158 tapitrisa dolara, nindramina tamin’ny banky sinoa Eximbank, rehefa nihemotra tsy hamatsy vola an’io asa io indray ny Vondrona Eorôpeana.
mercredi, 10 avril 2019 20:17
Académie Nationale des Sports: Nasiam-panavaozana sy fampitaovana
Notokanana ny Talata 9 Aprily 2019 ireo fanavaozana natao tao amin’ny ANS (Académie Nationale des Sports) etsy Ampefiloha izay ahitana « salle de musculation » antsoina hoe « RANITSE » izay misy karazana fitaovam-panatanjahantena harifomba, sy ny « Cyber-Etude Emergence » izay manana tanjaka internet ambony natokana ho an’ireo mpiofana ao amin’ny ANS.
Nisy koa fampitaovana ny efitranon’ny mpianatra sy ny fanomezana tsatoby ho an’ny baolina kitra sy ny hand-ball ary fanoloana fanamiana mitovy (survêtement sy T-shirt) ireo mpianatra tsirairay.
mercredi, 10 avril 2019 20:15
Zana-tsokatra sarona teny Fasankarana: Karohina ny tompon’ny io entana io
Teny amin’ny Toby fiantsonan’ny taksiborosy Fasankarana Antananarivo no tra-tehaka ireo zana-tsokatra Astrochelys radiata miisa 82 ny marainan’ny sabotsy 06 Aprily 2019 teo. Valizy iray nampiahiahy saika hampidirina tao anaty Taxi no nahitana azy ireto.
79 no velona tamin'ireo sokatra ireo ary efa noraisin'ny TSA (Turtle Survival Alliance) an-tanana ny fikarakarana azy alohan'ny hamerenana azy any atsimo, izay toerana niaviany.
Ao anatin’ny fikarohana ny tompon’ny io entana io ny manam-pahefana ankehitriny.
mercredi, 10 avril 2019 16:39
Ilaka-Est: Fako simika sa inona ?
Gaga ny olona nahita ity « citerne » be tsy fanta-pihaviana fefika teto amin’ny torapasika Ilaka-Est, Distrikan’i Vatomandry ity ny Talata 9 aprily 2019. Ny sasany nandinika ny fihavian'ity citerne ity, tao ny nanao tazan-davitra, ao ireo efa miketrika hitetika ilay vy be hamidy amin'ny kilao sitrany ahay vola.
Betsaka ny fanontaniana toy ny hoe : sao mba fako nisy simika nariana antsokosoko taty amin’ny fari-dranomasitsika Malagasy ka hampidi-doza koa anairana ny manampahefana mba hanadihady sy hanome fanazavana mba tsy hampiroaroa saina ny mponina.
mercredi, 10 avril 2019 16:12
Fifidianana depiote: Sahy hiatrika fifidianana eto Antananarivo ny zanak’Imady
Nahazo tsodrano tamin’ireo raiamandreny sy mpikambana ao amin’ny IMIANTA (Imady MIray eto ANTAnanarivo) ireo kandida mpiray lisitra narotsaky ny antoko Tiako I Madagasikara - K25 ao amin’ny Boriborintany faha-II, dia Randrianarisoa Stanislas na Rastany sy Tahinjanahary David, ity farany izay zanak’Imady tokana sahy hiatrika fifidianana eto Antananarivo Renivohitra.
Nampahafantarina tamin’ireo mpikambana IMIANTA ireo kandida, sady notsofin-drano satria ny tsodrano zava-mahery.
mercredi, 10 avril 2019 15:51
Maty amperin’asa: Nakarina ho “Adjudant” ilay “Sergent-Chef” novonoin’ny dahalo
Omaly talata tamin’ny fiandohan’ny tolakandro no nentina an-tanindrazana niazo an’i Vangaindrano ny nofomangatsiakan’ny Sergent-Chef Tafita Jean de La Croix, ilay mpitari-tafika naratra mafy rehefa nifanehitra tamin’ny dahalo tany Maintirano tamin’ny alarobia 3 aprily lasa teo, ary nodimandry ny marainan’ny alatsinainy 8 aprily.
Nisy ny fanaovam-beloma ara-miaramila nanomezam-boninahitra farany azy natao tao amin’ny Tobin’ny Rezimanta Miaramila Voalohany (RM1) Analakely Antananarivo, sy nanondrotana azy teo amin’ny laharan’ny grady “Adjudant”.
Miaramila tao amin’ny « Détachement » faritr’i Andreha i Sergent-Chef Tafita Jean de La Croix. Nanenjika dahalo izy ireo tamin’io andron’ny alarobia io. Miaramila efa-dahy izy ireo, ary i Sergent-Chef Tafita Jean de La Croix no mpitarika azy ireo.
mercredi, 10 avril 2019 15:41
Tsaratanana: Jiolahy roa mpaka an-keriny maty voatifitra
Lehilahy roa mpaka an-keriny sady mpanao fanafihana mitam-piadiana, izay efa nokarohana tany amin’ny Distrikan’i Tsaratanana, ary namana akaikin’ilay jiolahy mpaka an-keriny atao hoe : “DEL”, no lavo noho ny fiaraha-miasan’ny Zandary any an-toerana sy miaramilan’ny Tafika Malagasy izay manao hetsika any an-toerana ny sabotsy 05 aprily 2019.
Vehivavy iray izay mpiray tsikombakomba amin’izy ireo amin’ny famatsiana ody gasy sy basy koa no voasambotra nandritra izany ka basy fitondra mihaza mitotaly 03, fampiasan’izy ireo amin’ny asa ratsiny no nogiazana.
mercredi, 10 avril 2019 15:40
Maroantsetra : Vaky ny fonja, enin-dahy tafaporitsaka
Nanararaotra ny orambe nilatsaka sy ny jiro tapaka tamin’ny alina ireo voanfoja, nanendaka tafon-trano ary avy eny no nitsambikina ary nitsoaka.
Samy tsy mbola misy voatsara izy enin-dahy. Ny iray amin’ireo, izay namono PARAMED no nidirany am-ponja, efa nitsoaka ny fonja tamin’ny 2017 saingy voasambotra tany SAVA ary naverina ao am-ponja, dia izao mbola tafatsoaka izao indray.
Mandeha ny fikarohana amin’izao fotoana izao. Nohamafisina ihany koa ny fiambenana, sady nanamboatra ny simba.